Ungayilawula kanjani i-smartphone yendodana yethu i-iPhone noma i-Android | Izindaba zamagajethi
UPaco L Gutierrez | | Android, Apple, General
Mhlawumbe amaKhosi noma uSanta Claus balethe ingane endlini yethu i-smartphone yabo yokuqala. Sithi ingane kodwa asisho iminyaka ngoba kulezi zinsuku akucaci kahle noma uma iyeka ukuba ingane, noma ngabe iyiphi iminyaka enconyiwe yokusebenzisa lolu hlobo lwedivayisi. Okufanele kucace yilokho Kunconywa ukuthi ingane enefoni ephathekayo ne-inthanethi kufanele ibe nokulawulwa okuncane kwabazali mayelana nokufinyelela kwakho. Namuhla sizobona ukuthi abanye abazali, noma bexakeke kakhulu kwezobuchwepheshe, bangaba kanjani nalokhu kulawula.
Ngalokhu ngaphambi kokuthi sidinge izicelo zo-yebo noma yebo ezivela eceleni, manje kusuka ekucushweni kwedivayisi uqobo sikwazi ukufinyelela ezinketho ezahlukahlukene zokulawula amapharamitha ahlukahlukene.
1 Ungaqhubeka kanjani nge-iPhone
2 Ungakwenza kanjani uma une-Android
3 Izingane ze-Youtube
4 Isixhumanisi Somndeni we-Google
4.1 Ukusetshenziswa nezinketho
Ungaqhubeka kanjani nge-iPhone
Izikhumulo ze-Apple zinezindlela ezahlukahlukene zokulawula idivayisi yezingane, noma ngabe ibolekwe noma eyengane.
Ukuqala kufanele singene kuzilungiselelo bese uchofoza isikhathi sokusetshenziswaCindezela u-Qhubeka bese ukhetha "Lena [idivayisi] yami" noma "Lena [idivayisi] yengane."
Ngalokhu singakwazi ukulawula isikhathi lapho i-terminal isetshenziswa nokuthi yiziphi izinhlelo zokusebenza ezisetshenziswayo, ngale ndlela qapha uphinde ulawule konke okwenziwa ingane ngedivayisi. Futhi ungavimbela ingane yakho ukuthi ifake noma isuse izinhlelo zokusebenza, ukuthenga ngaphakathi kwezinhlelo zokusebenza nokunye okuningi
Ungakhawulela ukusetshenziswa kwezinhlelo zokusebenza nezici ezakhelwe ngaphakathi. Uma wenza kungasebenzi uhlelo lokusebenza noma umsebenzi, awususi, kepha kunalokho kufihle okwesikhashana esikrinini sasekhaya. Isibonelo, uma ucisha Imeyili, uhlelo lokusebenza lweMeyili ngeke luvele kusikrini sasekhaya uze uphinde ulivule.
Ungavimbela nokudlalwa komculo ngokuqukethwe okusobala, kanye nama-movie noma izinhlelo ze-TV ezinezilinganiso ezithile. Izinhlelo zokusebenza nazo zinezilinganiso ezingalungiswa ngemikhawulo yokuqukethwe.
Futhi singakhawulela izimpendulo noma ukuseshwa kwe-Siri online, ukugwema ukusesha okungafuneki. Izilungiselelo zobumfihlo zedivayisi yakho zikuvumela ukuthi ulawule ukuthi iziphi izinhlelo zokusebenza ezikwazi ukufinyelela kulwazi olugcinwe kudivayisi noma kuzici zehadiwe. Isibonelo, ungavumela uhlelo lokusebenza lwenethiwekhi yokuxhumana nomphakathi ukuthi icele ukufinyelela kwikhamera, ukuze ukwazi ukuthatha izithombe futhi uzilayishe.
Ungakwenza kanjani uma une-Android
Indlela enhle yalokhu ku-Android ukudala abasebenzisi abaningi kusuka ku- Amasethingi / Abasebenzisi. Kule menyu singavimbela imingcele eminingana kufaka phakathi izingcingo noma ama-sms. Le ndlela ilungele ukuthi lapho sishiya okwesikhashana ukuphela kwengane, imvamisa izongena kuhlelo lokusebenza olulodwa noma ezimbili.
I-Google play futhi ikuvumela ukuthi wenze kusebenze ukulawula kwabazali. Lokhu kuyathandeka ngoba singakhubaza okuqukethwe ngokweminyaka, ngale ndlela sihlunga izinhlelo zokusebenza ukugwema lezo ezinokuqukethwe kwezocansi noma okunodlame.
Izinga lalokhu kulawulwa lingenziwa kuzinhlelo zokusebenza nakumageyimu, ama-movie nomculo. Le nketho ifinyeleleka kusuka kuzilungiselelo / kumenyu yezilawuli zomzali zohlelo lokusebenza lwe-Google Play uqobo.
Uma lezi zinketho zinganele, sinokufinyelela kuzinhlelo zokusebenza eziningi ezingasisiza kulo msebenziKunenqwaba kodwa sizoncoma ezinye eziwusizo kakhulu.
Enye yezicelo ezithandwa kakhulu kubantu abadala nezingane yi-YouTube uqobo, kepha njengoba sazi kahle I-YouTube ilayisha konke, futhi yebo esikufunayo ukuthi izingane zethu azikwazi ukufinyelela kokuqukethwe kwabantu abadala. Kungcono ukulanda uhlelo lwezingane lwe-YouTube, lapho bazokwazi ukufinyelela kuphela kokuqukethwe Okumnandi Komndeni.
Uhlelo lokusebenza ngokwalo lunezinketho zokwazi noma ukulawula isikhathi izingane zethu esizichitha zibuka ividiyo, kanye nokuvimba okuqukethwe esingafuni ukuthi bakubone. Lolu hlelo lokusebenza luyatholakala kuzo zombili iOS njengoba Android.
Isixhumanisi Somndeni we-Google
Lolu hlelo lokusebenza olwenziwe i-Google uqobo lusetshenziselwa ukulawula ukude izingcingo eziphathwayo zezingane. Nale lokusebenza ungabheka isikhathi ingane yakho esichitha ibheka iselula, nokuthi isikhathi asichitha nohlelo.
Ngalokhu uzokwazi ukwazi uhlobo lokusetshenziswa onikeza ngalo idivayisi yakho, futhi ungasetha imikhawulo yesikhathi ukuze babe neselula ivuliwe noma uvimbele izinhlelo ezithile.
Ngalolu hlelo lokusebenza singazi futhi noma kunini lapho idivayisi elungiselelwe khona, setha imikhawulo ekubukekeni kokuqukethwe okuzotholakala ku-Google Play Isitolo noma ulungiselele i-SafeSearch ye-Google Vimba usesho lwabantu abadala noma okuqukethwe okungazifanele izingane.
Lezi ezinye zezinketho eziwusizo kakhulu zalolu hlelo lokusebenza ezitholakala zombili iOS ngokuqondene Android:
Indawo: Ungenza kusebenze umlando wendawo wedivayisi ukwazi ukuthi imephu eyimfihlo yezindawo ingane yakho eya kuzo yenziwe ngamadivayisi lapho zisebenzisa khona i-akhawunti ye-Google exhunyiwe.
Usebenzisa izinhlelo zokusebenza: Ungabona umsebenzi wezinhlelo zokusebenza usetshenziswa kumadivayisi ane-akhawunti exhunyiwe. Yiziphi izinhlelo zokusebenza ezisetshenziswe ezinsukwini ezingama-30 ezedlule nokuthi zingakanani.
Isikhathi sesikrini: Ungalungiselela inani lamahora okungenziwa ukuvulwa kwesikrini esingumakhalekhukhwini kusuka ngoMsombuluko kuye ngeSonto. Kukhona futhi nenketho Isikhathi sokulala, ebeka amahora athile lapho iselula ingasavunyelwe khona.
Aplicaciones: Ungabona izinhlelo zokusebenza ezisanda kufakwa kanye nalezo ezifakwe kuselula, bese uvimba lezo ongafuni ukuzisebenzisa.
Izilungiselelo zedivayisi: Ungaphatha izimvume nezilungiselelo zedivayisi lapho kusetshenziswa khona ama-akhawunti axhunyiwe. Ungangeza noma ususe abasebenzisi, unike amandla noma ukhubaze imvume yokufaka izinhlelo zokusebenza kusuka kwimithombo engaziwa, noma izinketho zonjiniyela. Futhi ungashintsha amasethingi endawo futhi ubheke izimvume ezinikezwe izinhlelo zokusebenza kudivayisi.
Lolu hlelo lokusebenza lokulawula kwabazali likuvumela ukuthi ulinganise isikhathi ingane yakho esichitha namadivayisi, lawula okuqukethwe kwewebhu okufinyelela futhi uvimbe izinhlelo ozisebenzisayo. Nawe ungakwenza bona ngesikhathi sangempela ukuthi ingane yakho yenzani ne-smartphone ngaso sonke isikhathi. Uhlobo lwamahhala lohlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ulawule ingane eyodwaUkuze ungeze amahlumela amaningi, kuzodingeka ukuthi udlule kunguqulo ekhokhelwayo. Lapha ungalilanda ngefayela le- iOS.
Amanani wenguqulo ekhokhelwayo asuka ku- € 42,95 ngonyaka ngenguqulo eshibhe, efinyelela ku- € 106,95 yenguqulo ebiza kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Ungalawula kanjani iselula yezingane zethu ku-Android naku-iOS
Ungasibona kanjani isikrini se-iPhone ku-TV nge-ChromeCast